नेपालमा कृत्रिम यौनाङ्ग (सेक्स टोय) को बिक्रि बढ्दै, कति पर्छ त मूल्य? कहाँ कहाँ किन्न पाइन्छ ? - Sabal Post
नेपालमा कृत्रिम यौनाङ्ग (सेक्स टोय) को बिक्रि बढ्दै, कति पर्छ त मूल्य? कहाँ कहाँ किन्न पाइन्छ ?
कृत्रिम यौनाङ्ग सेक्स टोय हरुमा पुरुष र महिला दुवैका पर्छन् । विशेषगरि महिलाको लागि पुरुषको पेनिस र पुरुषको लागि महिलाको भेजिना आवश्यक हुन्छ । पुरुषले प्रयोग गर्ने सेक्स टोयमा २५ सयदेखि २५ हजार सम्मका छन् । त्यसैगरि महिलाले प्रयोग गर्नेलिङ्ग २५ सयदेखि ७५ सय रुपैंयाँ सम्मका छन् । खासगरी व्यस्त मानिसहरुका परिवारहरुबीच लामो समय सम्मयौन सम्पर्क हुन पाउँदैन भने लामो समय विदेश गएर बस्नेहरुका श्रीमान श्रीमती पनि यौन समागमबाट टाढा हुन्छन् ।
त्यसैले त्यस्ता मानिसहरुलेसेक्सटोयहरुको प्रयोग गर्ने गर्दछन् । नेपालमा बैदेशिक रोजगारका लागि अधिकांश नेपालीहरु विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ । यसले गर्दा परिवारबीच लामो समय भेट हुँदैन । लामो समय एकल बस्नु पर्दा मानिसले अनैतिक सम्बन्ध राख्ने पनि हुन्छन्, त्यसको लागि यस्तासेक्स टोयको प्रयोगले अनैतिक सम्बन्ध राख्नबाट बचाउँने यौनस्वाथ्य सम्बन्धका चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
लगातारको वर्षाका कारण सेतीमा सतह बढ्यो, पुल…
भारतीय पूर्व विदेशमन्त्री स्वराजको राजकीय सम्मानका साथ…